आज भ्यालेन्टाइन दिवस अर्थात् प्रेम प्रस्ताव राख्ने गर्ने दिन ! – Upahar Khabar
आज भ्यालेन्टाइन दिवस अर्थात् प्रेम प्रस्ताव राख्ने गर्ने दिन !
प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०८:३८ February 14, 2020
इटालीका पादरी सेन्ट भ्यालेन्टाइनले तत्कालीन नियमविरुद्ध सैनिकहरुको प्रेम विवाह गराइदिएको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । सैनिकको विवाह गराइदिएका पादरी भ्यालेन्टाइनलाई तत्कालीन शासकले मृत्युदण्ड दिए पनि उनी प्रेमी–प्रेमिकाका लागि सधैँ अमर रहेको भन्दै फेब्रुअरी १४ मा प्रणय दिवस मनाउन थालिएको हो । प्रणय दिवसको दिन विशेषगरी गुलाबको फूल दिएर प्रेम अभिव्यक्त गर्ने भएकाले आज गुलाबको फूलको कारोबार बढी हुने व्यवसायीले बताएका छन् ।
असार मसान्तमा पानी झर्ने, ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न